Anise | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Isi ụdị budley toro na ubi
Budley ma ọ bụ buddleya (site na Latin Buddleja) bụ osisi na-acha osisi ma ọ bụ shrub everbreen (nke nwekwara osisi herbaceous) si n'ezinụlọ Norichnikova. Ị ma? A na - akpọ Budley n'aha onye omekorị Bekee A. Baddle. A na-akpọkwa ya ụbịa lilac (inflorescences nke budley yiri ụyọkọ nke lilac), ihe magnet maka butterflies na osisi moth (nke akwụkwọ ntanet na-amịpụta).
Mkpụrụ ọgwụ nke anise osisi
Site na oge ochie, a na-eji mkpụrụ osisi bara uru dị iche iche mee ihe maka ihe ndị na-eri anụ na ọgwụgwọ, a na-amụrụ ihe ndị ha na mmetụta ha n'ahụ. Ndị a na-agụnye anise a maara nke ọma, na ojiji ejighị ọgwụgwọ ọdịnala eme ihe, a na-ejikarị ya eme ihe na ọgwụ ndị omenala. Ihe kpatara nke a - a ga-atụle ya n'isiokwu ahụ.
Kedu ka ị ga-esi agwa anise si cumin
Anise na cumin - ngwa nri ndị nwere ọtụtụ ngwa na ụlọ ọrụ nri. Gụkwuo banyere ihe ngwa nri ndị dị iche na ihe ha bụ, gụkwuo na isiokwu. Nkọwa na njirimara nke osisi Cumin na anise emeela ka ụmụ mmadụ nwee ọganihu kemgbe oge dị anya, n'ihi na ọ dị mma ịkụzi ha.
Na-agha mkpụrụ maka ịgha mkpụrụ nke ọnwa maka kalenda na August 2019
Chistyak: ilekọta, ịgha mkpụrụ, uru bara uru nke osisi ahụ
Na-eri anụ a na-achọ mma: ihe a ga-enye nri, na ihe na-enweghị ike
Otu n'ime mmanya kachasị mma - Livadia Black
Kedu ihe bụ ihe onwunwe nke horseradish mgbọrọgwụ? Ntuziaka maka ọgwụgwọ nke ọgwụ ịgba ọgwụ
Ịzụ ịnyịnya: ụdị àgwà
Ndị na-elekọta ụlọ. Kedu ka esi tufuo agba charel na mpaghara ahụ ozugbo?
Pasila Bellarosa: amị mkpụrụ, buru ibu, oké ọkọchị na-eguzogide